शीर्ष नेताका श्रीमती, भाई, छोरी र छोरा: कसले जिते, कसले हारे ? [सूचिसहित] – Sudarshan Khabar
शीर्ष नेताका श्रीमती, भाई, छोरी र छोरा: कसले जिते, कसले हारे ? [सूचिसहित]
, जेष्ठ ११ २०७९
प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले स्थानीय तह निर्वाचनमा परिवारका सदस्यलाई शक्तिको आडमा उम्मेदवार बनाए पनि मतदाताले कतै स्वीकार गरेका छन् भने कतै अस्वीकार गरेका छन् ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणामअनुसार कांग्रेस नेता रामकृष्ण खाँणले १७ हजार ५ सय ४३ मत ल्याएर अग्रता लिइरहेका छन् । खाँणलाई एमालेका उम्मेदवार मोहन चापागाँइैले १६ हजार ६ सय ५९ मतसहित पछ्याइरहेका छन् ।
यस्तै, कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले आफ्ना भाइ बालकृष्ण बस्नेतलाई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएका थिए । बस्नेतले ७ हजार ७ सय २८ मत ल्याएर विजयी भइसकेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेणु दाहाललाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएका थिए । रेणु ५२ हजार ३० मत ल्याएर मेयरमा विजयी भइसकेकी छन् ।
उता सभामुख अग्नि सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको मेयरमा भाइ कृष्णप्रसाद सापकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । सापकोटा ११ हजार ७२ मत ल्याएर मेयरमा विजयी भइसकेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समेत आफ्ना छोरा अमरेन्द्र यादवलाई विराटनगर महानगरपालिकाको उपमेयरको उम्मेदवार बनाए । तर, विराटनगरका मतदाताले उनलाई पत्याएनन् । मेयरमा दाबी गर्दै आएका अमरेन्द्र उपमेयरमा समेत विजयी हुन सकेनन् ।
यसैगरी, जसपाबाट मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएका लालबाबु राउतले श्रीमतीलाई गाउँपालिकाको उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाए । तर, विजयी गराउन सकेनन् ।
प्रकाशित भएको : May 25th, 2022
बैठकमा प्रचण्डलाई दबाब : कि सहमति गर…
प्रचण्डलाई दबाब : कि सहमति गर नत्र…
केहि ब्यक्तिको कारण संगठनमा अराजकता देखियो छानबिन…
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मातृकाले भने-अन्तरघातीकाे लिस्टमा छु
लैनचौरमा रहेको भारतीय दुतावासमा गोलि चल्यो: एक…